Nabateana - Wikipedia
Ny Nabateana dia vahoaka arabo mpivarotra tamin'ny Andro Taloha izay nonina tao atsimon'i Jordania sy i Kanaana, sy tao avaratr'i Arabia ankehitriny. Taorian'ny faharavan'ny Empira seleokida dia afaka nanitatra ny fanjakany mianavaratra izy ireo hatrany amin'ny faritr'i Damasy (na Damaskosy). Amin'ny teny grika dia atao hoe Ναβαταῖος / Nabataîos ny Nabateana, fa amin'ny teny latina dia Nabataeus. Amin'ny teny arabo dia atao hoe الأنباط / al-ʾAnbâṭ .
Ataon'ireo mpanoratra grika-latina hoe Arabia ny anaran'ny fanjakan'ny Nabateana, nefa i Flavio Josefa mampiasa ny anarana hoe Nabatena. Ny faritry ny fanjakany dia nifanefitra tamin'ny an'i Siria, ao avaratry ny Ranomasina Mena sy ny Saikanosin'i Arabia, ary nivelatra nankany amin'i Eofrata. Tamin'ny fanitaram-panjakana nataon'i Pompeio tamin'ny taona 64 dia lasa fanjakana nanompo an'i Roma ny Fanjakana nabateana, nefa nanana fahaleovan-tena ihany izy ireo amin'ny sehatra sasany. I Petra no renivohiny, izay hita ao amin'ny tanin'i Jordania ankehitriny, sady ahitana trano, fasana, tempoly ary teatra voasokitra anaty vatolampy.
Namolaka ny rameva ho azo ompiana izy ireo ka afaka nanao raharaham-barotra avy any amin'ny tapany atsimon'i Arabia, dia mamakivaky toerana misy rano izay nanaovany fambolena. Ny faritr'izany tany rehetra nofeheziny izany dia tsy fantatra mazava. Nivarotra ny vokatr'i Arabia mankany Siria sy any amin'ny Empira romana ary koa nankany amin'ireo firenena any atsinanan'i Eofrata izy ireo.
Tamin'ny taona 106 taor. J.K. dia nanakambana mivantana ny Fanjakana nabateana tamin'ny Empira romana ny emperora Traiàno (na Trajàno) ka teraka noho izeany ny Faritany romanan'i Arabon'i Arabia, izay nanafoana tsikelikeky ny maha mpivarotra tokana azy ireo sy ny kolontsainy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nabateana&oldid=993859"
Voaova farany tamin'ny 1 Jolay 2020 amin'ny 04:02 ity pejy ity.